Khasaaraha shaqo ee Dalxiiska Waqooyiga Queensland si uu uga sii bato Kirismaska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Khasaaraha shaqo ee Dalxiiska Waqooyiga Queensland si uu uga sii bato Kirismaska
Wararka Ururada • Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Gobolku wuxuu kobciyey shaqaalihiisii ​​dhammaan silsiladda sahayda oo dhan oo diyaar u ah jiilaal mashquul ah, laakiin hadda shaqaalahan cusub, oo ay ku jiraan in ka badan 200 oo ka socda warshadaha dalxiiska, oo tababar ku jiray bilo ayaa loo sheegayaa inay shaqo kale raadsadaan.
Tropical North Queensland ayaa u xanniban 3,150 dalxiis shaqo oo soo waajaha Kirismaska.
Xoogagga dalxiiska ee TTNQ ayaa hoos u dhacaya kala bar cabbirka ka hor masiibada.
Luminta shaqooyinka TTNQ ayaa laga dareemay dhammaan warshadaha.
3,150 kale oo ah shaqooyinka dalxiiska ee Tropical North Queensland ayaa lumin doona Kirismaska ​​oo hoos u dhigaya shaqaalihii dalxiiska ilaa kala bar cabirkiisii ​​hore, sida lagu sheegay cilmi-baaris cusub oo ka timid Madasha Dalxiiska iyo Gaadiidka (TTF).
Dalxiiska Dalxiiska Waqooyiga Queensland (TTNQ) Madaxa Fulinta Mark Olsen ayaa sheegay in dalxiiska uu shaqaaleysiiyay 15,750 shaqaale waqti-dhiman iyo waqti dhiman ah, iyadoo qarashka dalxiiska dadban, ay taageereen wadar ahaan 25,500 oo shaqo kahor masiibada gobolka Cairns.
"Bishii Luulyo 2021, waxaan luminay 3,600 shaqaale joogto ah, xitaa iyadoo ay taageerayaan JobKeeper iyo suuq gudaha ah oo soo noqonaya," ayuu yiri Mr Olsen.
"Dawladdu waxay u baahan tahay inay fahamto sida ay saamayn weyn ugu yeelan doonto beesheena oo shantii qofba mid ka mid ahi ku tiirsan yahay dalxiiska."
“Shaqaalaha istaaga oo lumiya saacadaha shaqada sabab la xiriirta qufulka aaggooda waxay awoodaan inay helaan ilaa $ 750 asbuucii COVID-19 musiibo bixinta taageerada dakhliga ee Centrelink, ”ayuu yidhi.
Maamulaha shirkadda Advance Cairns Paul Sparshott ayaa sheegay in awoodda dhaqaalaha gobolka ee soo kabashada ay aad u yaraan doonto haddii shaqaale xirfad leh ay ku waayaan waaxda dalxiiska iyo martigalinta.
“Waxaa jiri doona cawaaqib aad u ballaaran. Markay suuqyada dalxiisku aad u saameeyaan waxay u gudubtaa warshado kale oo saameeya dhaqaalaha gobolka oo dhan, ”ayuu yidhi.
Mr Olsen wuxuu sheegay in Tropical North Queensland ay tahay, ayna ahaan doonto, mid ka mid ah gobollada ugu saameynta badan Australia iyo aragtida warshadaha dalxiiska ayaa ahaa mid xun.
“Macaamiil la'aan, ganacsatadu ma laha wareejin ay ku sii hayaan shaqaalahooda xirfadda sare leh, kuwaas oo qaarkood ay sannado tababar ku qaateen meelo khaas ah si ay u noqdaan kuwa boodboodayaasha ah, kuwa quusta quusta iyo kuwa boodbooda oo bixiya khibradaha dalxiiska ee gobolka.
“Ganacsiyada badankood waxay ku shaqeeyaan wax ka yar 5% dakhligooda caadiga ah, iyo ballansashada hore ayaa hoos u dhacaya hoteellada illaa 15-25% deggenaasha iyo in ka badan $ 20 milyan oo dhacdooyinkii dib loo dhigay Luulyo iyo Ogosto.
“Waxaan haynaa doonyo ay la socdaan lix qof oo rakaab ah iyo afar shaqaale ah inta badan goobahoodu waxay ku jiraan saacado ganacsi oo xaddidan, halka kuwo kalena ay galeen hurdo la’aan.
Xog laga helay wakaaladaha socdaalka tafaariiqda ayaa muujinaya in Cairns ay weli tahay tii shanaad ee loogu raadinta badnaa iyo meeshii lixaad ee safarka ugu badan ee la ballansanaa afartii toddobaad ee la soo dhaafay, laakiin waxaan ku soconnaa wax ka yar 25% baaritaannada iyo 55% ee ballansashada halkii aan markii hore COVID."